သစ်ပင် စိုက်ကြမယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » သစ်ပင် စိုက်ကြမယ်
Posted by ဆူး on Jun 25, 2011 in Think Tank | 55 comments
ဆူး စိတ်ကူး သစ်ပင် စိုက်မယ်
ရွာသားတွေကို တယောက်ကို မြေ ၁ဧက ပေးလိုက်မယ် ဆိုရင် အဲဒီ မြေ ၁ဧက မှာ ဘာလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိလဲ။
မှတ်ချက်.. အိမ် နဲ့ တခြား အဆောက်အအုံ မဆောက်ရ.. အပင် စိုက်ဖို့ သီးသန့် တွေးပြီး ရေးရန်သာ ဖြစ်သည်။
အခုခေတ်စားနေတဲ့ နဂါးမောက်သီးတော့ စိုက်ကြည့်ချင်သား …
နဂါးမောက်သီးက စိုက်ပြီး ရောင်းချတာ ဗီယမ်နာမ်မှာ တော်တော် အလုပ်ဖြစ်နေတာ.. သူတို့ နိုင်ငံ အတွက် စီးပွားရေး တော်တော် အထောက်အကူ ပေးတယ် ပြောတယ်။ ဒီမှာကတော့ သိပ်လည်း တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် မစိုက်သလို ဈေးကွက် မရသေးဘူး။ နိုင်ငံခြားကို ထိုးဖောက်ပြီး ရောင်းနိုင်မှ အဆင်ပြေမယ်။
ဆေးပင် အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ရဲယို ပင် စိုက်ပြီး ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး ဆိုလား ပျောက်ဆေး ဆိုလား စမ်းနေတဲ့ သူဌေး တယောက် ရှိတယ် လှည်းကူးဘက်မှာ.. စမ်းတာ မအောင်မြင်သေးလို့ ဆိုလား ပြောတယ် အောင်မြင်ရင် ဂျပန်ကို ဈေးကွက် ဖောက်ဖို့ စာချုပ်တောင် ချုပ်ပြီးပြီး ကြားတယ်။
အနံ့ရော အရသာရော ကြိုက်တယ်။
ဟိုတလောက forward မေးလ်ထဲမှာ စတော်ဘယ်ရီပင်တွေကို စင်တင်ပြီးစိုက်ထားတာတွေ့ရတယ်။
အသီးလည်းကြီးပြီးတော့ ကြည့်ယုံနဲ့တင် စားချင်လာတယ်။
စတော်ဘယ်ရီ အသီး အလုံးကြီးတွေ ဂျပန်မှာ စိုက်တယ် ရာသီဥတု အေးလို့ ဖြစ်ထွန်းတဲ့ အတွက် အသီးက ခပ်ချဉ်ချဉ် နဲ့ ချိုမြမြလေးဖြစ်ပြီး စားကောင်းတယ်။ ထိုင်းကို တင်ပို့တယ်လို့ ပြောသံကြားတယ်။
ထိုင်းမှာလည်း စိုက်မယ် ထင်ပါတယ်။ ထိုင်းမှာလည်း အဲဒီ စတော်ဘယ်ရီ အလုံးကြီးတွေ တွေ့တယ် အသင့်စား ဘူးထဲ ထည့်ထားတာရှိသလို.. လမ်းဘေးတွေမှာလည်း ခွက်ကလေးနဲ့ အလုံး ၄ ၅ လုံး လောက်ထည့်ထားပြီး သကြားလေး အပေါ်က ပုံလို့ ဒုတ်ကလေး ထိုးပြီး ထည့်ထားတယ် တခွက် ၁၀ ၂၀ ရောင်းကြတယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံမှာတော့ စတော်ဘယ်ရီ အလုံးကြီး ဒီတိုင်း ကိုက်စားတဲ့ အကျင့် မရှိတဲ့ အတွက် ဖျော်သောက်ကြပါတယ်။ ဖျော်သောက်တဲ့အခါ မြန်မာသီး အလုံးညှက်ညှက်လောက် အရသာ သိပ်မတွေ့ကြလို့ အလုံးကြီး က ဈေးသိပ်မရကြပါဘူး။ အလုံးသေးတွေကိုသာ လက်ဖျော် စက်ဖျော် ဆိုပြီး ဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်သောက်ကြတယ်။ မြန်မာ ပါးစပ်ကတော့ အလုံးကြီး အရသာ ပေါ့တယ် ပြောကြတယ်။
ကျွန်တော် တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေ ထက် စာရင် ရေခံမြေခံ ကောင်းတာကြောင့်မို့ဘာစိုက်စိုက် အောင်မြင်မှာ အသေအချာ ပဲ မို့ ဆူးများတဲ့ နှင်းဆီ လှလှလေး တွေ စိုက်မယ် ဗျာ ။
၁ဧကထဲဆိုတော့ ကျွဲကောပင်တွေ ခပ်ကျဲကျဲစိုက်ထားပြီး အပင်တက်လာတော့မှ ကီလိုမာလကာတွေ ကိုင်းကူးစိုက်မယ်။
စည်းရိုးပင်အဖြစ်တင်းဝါးမြစ်ကလေးတွေချထားပြီး ၊ အလယ်မှာ တဲကလေးဆောက်မယ်။
ရေတွင်းလေး တူးပြီး ငှက်ပျောပင် နဲ့ သင်္ဘောပင် စိုက်.. ကြီးမြန် သစ်ပင် အသီး အမြန်ရမယ်။
ဧည့်သည် လာရင် ငှက်ပျောသီးနဲ့ သင်္ဘောသီး ဧည့်ခံလို့ရသေးတယ်။
အနော်ကတော့ ရန်ကုန်မှာ စီးပွားဖြစ်သစ်ခွသင်တန်း တက်ဖူးတယ် အခုလက်ရှိလဲအိမ်ှာ နည်းနည်းပါးပါးစိုက်ထား လို့ သစ်ခွကို စီးပွားဖြစ် အကြီးအကျယ် စိုက်ကြည့်ချင်တယ်
သစ်ခွပင်တွေက တော်တော် အလုပ်ရှပ်တယ်နော်..
အချိန်မှန် ဆေးဖြန်းရတာနဲ့ မှိုဆေး ပိုးသတ်ဆေး အမြစ်အားဆေး အပင်အားဆေး အပွင့်အားဆေး အချိန်နဲ့ အညီ အချိုးကျ လုပ်နိုင်မှ ကောင်းမယ် ထင်တယ်။ ထိုင်းမှာ ဆိုရင် သစ်ခွ ခြံကိုပဲ ခရီးသွား ဧည့်သည်တွေ သွားလည်စရာ နေရာ တခုလို ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတယ်။
ခြံ တခုလုံး သစ်ခွ ပင်တွေ အမျိုးပေါင်း များစွာ စိုက်ထားသလို ဧည့်သည်တွေ စားဖို့ ဘူဖေး စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်ထားတယ်။ စားပြီး သောက်ပြီး ခြံထဲ ဆင်းပြီး သစ်ခွ အပင်တွေ လိုက်ကြည့် ပြီး စိတ်အပန်းပြေ နေလို့ ရအောင် လုပ်ပေးထားတယ်။
ခြံကရန်ကုန်မှာဆိုရင် ဘေးဖက်တွေကို သရက် ပင်စိုက် ပြီးရင် အလယ်မှာ ဘောင်ထိုးပြီး သပြေပင်လေးတွေစိုက် ။ထောင့်တစ်ထောင့်မှာတော့ ရေကန်လေးထားပြီး ရေကန်ဘေးမှာ ဘူးစင်လေးထားချင်သား။ မျက်စိပသာဒဖြစ်အောင် အကြမ်းလည်းခံတဲ့ ပိန်းပန်းအိုးလေးတွေထားမယ်
ရွေရင်းမာ ကြာ ခ၀ဲ
ဖွဲ စ နှင်းလျှံ
ခွာတန် နှင့် ပေါက်လဲ
ပွင့်ဝတ်ကယ် ရွှေ ဖီမင်း
တန်ခူး ကံ့ကော်ပန်း၊ ရင်ခတ်ပန်း
ဘာကို အိပ်မက်မက်ဖူးလဲဆိုတော့..၁၂ရာသီပွင့်တဲ့ပန်းတွေကို အိမ်ဝင်းထဲ စီပြီးစိုက်ထားဖို့ပဲ..။
အဲဒါဆို ၁၂လရာသီ ပန်းပွင့်တဲ့ခြံရမယ်ပေါ့။ အခုတော့ အဓိပါယ်ပါ ပါလာပြီပေါ့.။
အရောင်တွေပါ သိချင်သား။ အိပ်မက်ပန်းခြံအတွက်လေ..။
ပထမ လေကာပင်အနေနဲ. ၃နှစ်အုန်း ကိုစိုက်မယ်
တတိယနှစ်ဆို အုန်းသီးရော ဌက်ပျောရော ကွမ်းရွက်ကလဲထွက်ပြီလေ၊
ပွဲတပွဲစာ ရပြီမို. ဘုရားစောင်းတန်းကဒိုင်တွေကိုခေါ်ရောင်းလိုက်ရုံဘဲ
နေရာကောင်းကောင်းရထားရင် ရွှေ ဖြစ်ပြီ
အပင်စိုက်စိုက် မစိုက်စိုက် နေရာကောင်းရင်
တစ်ဧက ပဲ ဆိုတော့ ဘိန်း စိုက်ပါမယ်..
အတော် အကြံကြီးတာပဲ.. စိတ်ကူးက လန်ထွက်နေတာပဲ။
ဘိန်းစိုက်ဖို့ လိုင်စင်ကိုတော့ သဂျီးဆီမှာ တောင်းလိုက်ပါ.. သဂျီးက လိုင်စင်ချ ပေးဖို့ ရှိတယ် ပြောတယ်။
စိုက်ချင်တာတွေကတော့ အများကြီးပဲ။ နှစ်ရှည်ပင်ရော၊ နှစ်တိုပင်ရောပေ့ါ။ အရိပ်ရပင်၊ သီးပင်၊ စားပင်၊ ပန်းပင် တွေရောပဲ။ဒါပေမယ့် စိုက်တတ်တာတော့ ဘာမှ မရှိတော့ စိုက်ပြီး မရှင်မှာ စိုးရိမ်တယ်။ ;(
စိတ်ကူးနဲ့ စိုက်ခိုင်းကြည့်တာလေ.. လက်တွေ့ မဟုတ်သေးဘူး။ ရဲရဲသာ စိုက်ကြည့်ပါ.. များများ ဖြစ်ထွန်းလာအောင်.. ဟဲဟဲ..
သန်လျင်မှာ လာစိုက်ကြမလား … မြေကြီးကောင်းတယ် … ဘာစိုက်စိုက်ဖြစ်တယ် … ဒါပေမယ့် မြေဈေးတော့ တော်တော်ကြီးတယ်နော် …
သန်လျှင်ဘက်က အသိတစ်ယောက် တစ်ခါက ပိန္နဲသီး လက်ဆောင်ပေးတာ အရမ်းကောင်းတာပဲ။ တစ်ခါမှ အဲလိုကောင်းတာ မစားဖူးဘူး။ အခု သန်လျှင်ဘက်မှာ သစ်မွှေးတွေ စိုက်နေကြတယ် ပြောတယ်။ စိုက်တဲ့အသိတစ်ယောက်က စိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ စိုက်နည်း ဗွီဒီယိုတွေတောင် လာပြသွားသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အောင်မြင်တဲ့အထိတော့ မရောက်သေးဘူး။ သူက မျိုးရောင်းချင်တာလေ။
ဟုတ်လားဘယ်သူလဲ ကျနော်တော့ ဟုတ်ပါဘူးနော်
အခု ယိုးဒယားပိန္နဲသီးတွေ စိုက်ကြတယ် … အရမ်းကောင်းတယ် .. အလုံးလဲကြီးတယ် ..
တစ်လုံးကို ၈ ထောင် တစ်သောင်းလောက်ရတယ် … ကျွန်မတို့အိမ်မှာတောင် ဒီနှစ်စမ်းပြီးစိုက်ထားသေးတယ် … အသီးသီးရင် မမတို့အိမ်ကို ပို့လိုကမယ် …
အဲဒီ ပိန္နဲသီးတွေက အပင်ပုပုနဲ့ သီးကြတယ်။
ဒီနှစ်ကြားမိတာ.. အသီး တွေ ပေါလွန်းလို့ ဈေးကောင်း သိပ်မရဘူး ပြောသံကြားတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး။
ဆူး လည်း ပိန္နဲသီး စိုက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ် လုပ်ချင်တဲ့ စီမံကိန်း တခု ရှိတယ်။ အခုထိတော့ မစမ်းကြည့်ရသေးဘူး။
ဝေေ၀ရေ- အားလည်းနာတယ်၊ ခင်လည်းခင်တယ် နော်။
အောင်သပြေ ညောင်ရေလောင်းရင် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် တခြံလုံး သပြေပင်တွေဘဲစိုက်မယ်။
သရက် သဘောင်္ ငှက်ပျော မာလကာ ပိန္နဲ ဒန့်ဒလွန် သံပုရာ အုန်း ဗန်ဒါ ပိတောက် ဇီဇ၀ါ နှင်းဆီ နဲ့ ဆေးဘက်ဝင်ပရဆေးပင်တွေစိုက်မယ်။
ပဒေသာပင် ပဲ စိုက်ချင်တယ်… ဟီးဟီး…
ဘုံကထိန်ကျရင် လာစိုက်နော်၊ များများလေး။
ဆူးရေ ဘယ်နားက မြေပေးမှာလဲ။ လယ်မြေလား၊ ယာမြေလား။ လယ်ဆို နှစ်သီးရမယ်။ ယာမြေဆို သုံးသီးရမယ်။ ဥယျာဉ်မြေ ဆို၇င်တော့ နှစ်ရှည်ပင်ပေါ့။ မမှီတို့ဘက်မှာ ယာမြေ ဈေးအကြီးဆုံး၊ လယ်က ဒုတိယ၊ ယာမြေကတော့ အနည်းဆုံးပေါ့။
စိတ်ကူးထဲမှာ ဆိုတော့ အမ ဘယ်လို မြေမျိုး လိုချင်လဲ.. စိတ်ကူးနဲ့ စိုက်ကြည့်ပေါ့။
ရွာထဲက လူတွေ ရဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေကို သိချင်လို့ စမ်းသပ်တဲ့ သဘောပါပဲ။
တို့ကတော့ သစ်မွှေး(agar wood)ပဲ စိုက်ချင်တယ်။
ကိုယ်တိုင်မစိုက်တတ်လည်း အကျိုးတူ ပူးပေါင်းမယ့် လူတွေရှိတယ်..။ :D
တယ်ဟုတ်ပါလား သစ်မွှေးကို လူသိများနေသားပဲ
ကိုယ့် မျိုးဆက် လက်ထက်မှာတော့ အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်..
ကြာကြာ စိုက်ရတဲ့ အမျိုးဆိုတော့လည်း… ကိုယ်က ကြိုစိုက်ပေးမှ သူတို့က စားရမှာလေ..
မန်ကျည်းပင်အောက်မှာလည်း ဖန်ခုန်တမ်းလေးတွေ ဆော့စေချင် စမ်းရဲ့..
မန်ကျည်းသီးဖျော်ရည် လုပ်သောက် ပါစေပေါ့..
ကိုယ်လည်း စားလို့ရမယ်.. သူတို့လည်း စားရမယ်..
မန်ကျည်းပင် နောက်မျိုးဆက် အတွက် ဆိုပြီး သိပ်မတွေးနဲ့ ၁နှစ်လောက်ဆို မန်ကျည်းရွက်နု ခူးပြီး သုတ်စားလို့ ရပြီလေ။ ကိုယ်တိုင် အတွက်လည်း အကျိုးရှိပါတယ်။
ငှက်ပျောပင် ဆိုလည်း ခုတ်လေ ပွားလေပဲ.. ငှက်ပျော အူတိုင် ရောင်းစားလည်း အကျိုးမယုတ်ဘူး။
ငှက်ပျော အူတိုင် သုံးနိုင်တဲ့ နေရာ တခု ရှိသေးတယ်။
ငါးကန် ပုဇွန်ကန် တွေ အနားသတ်မှာ ငှက်ပျောပင်တွေ စိုက်ကြတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်တော့ ခြံစောင့် ငါး ပုဇွန် လက်မဆော့ပဲ ငှက်ပျောသီးပဲ ရောင်းစားပြီး နေအောင်…
နောက်အချက်ကတော့ တစုံတယောက်က မကျေနပ်လို့ အဆိပ်ခတ်ရင် ငါးတွေ အကုန်သေနိုင်ပါတယ်။ အဆိပ်ခတ်တယ် ဆိုတာ သိရင် ချက်ချင်း ငှက်ပျောပင်တွေ ခုတ်လှဲပြီး ရေထဲ မျှောရင် အဆိပ်တွေ စုပ်ပေးလို့ ငါးတွေ အသေအပျောက် အလွန်နည်းပါတယ်။ အဆိပ်ခပ်တာ စောစော သိရင် ငါး အသေနည်းပါတယ်။ ငှက်ပျောတုံးက အဆိပ်စုပ်လို့ ငှက်ပျောအူ မဲသွားတယ်။
ဂွေးချိုသီးပင်စိုက်မယ် ဒါက ပင်စည်မာမျိုး
( ခုခေတ် မော်ဒယ်တွေက ဒီလို ချိုချဉ် အသီးတွေကိုကြိုက်တယ်လေ )
ဒါမှာ ဂွေးတောက်ပင်က ဂွေးချိုပင်ကို နွယ်တက်သွားရင် စင်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူး
( ဂွေးတောက်ရွက်က ဆေးဖြစ်တယ် )
ကျွန်းစိုက်မယ်ဗျို.။ ကိုယ်တော့အကျိုးခံစားရမှာမဟုတ်ဖူး ဒါပေမဲ့ကိုယ်မျိုးဆက်အတွက်တော့ Good ပေါ့
အဲဒီ မျိုးဆက်တွေ အမွေလုနေကြပါဦးမယ်ဗျာ..
အခုတောင် ထိုင်း နဲ့ တရုတ်ကြီးတို့ အမွေ လုတာ တော်တော် နည်းသွားပြီ။
သံပရာပင်စိုက်မယ်။ မေမြို့ပန်းတွေလည်းစိုက်မယ်။ ငှက်ပျောပင်စိုက်မယ်။ တော်ပြီပေါ့။
ခုမှစပြီးစိုက်ရရင် ကြာတာပေါ. ကွယ် …….အသက်ကိုလည်းထဲ့ စဉ်းစားရသေးတယ်..
အဲဒီတော. သီးပင်စားပင် အပင်ကြီးတွေ အစုံပါတဲ့ ခြံကို ၀ယ်ပါမယ် ……. ပြီးမှ ကိုယ်ကြိုက်တဲ. ပန်း၊ စားပင်၊ ဆေးပင် ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ရှားပါး နှစ်တိုပင်မျိုးတွေ ကို ဖြည်. စိုက် မယ်လေ …… ပန်းတွေကိုလည်းချစ်တယ် အသီးခူးရတာလည်း နှစ်သက်တယ်၊ ဆေးဖက်ဝင် အပင်တွေ နဲ.ဘုရားပန်း လက်ဆောင် ပေးရတာ ကိုလည်း နှစ်သက်တယ်။
ငယ်ငယ်က အဖွား ခြံထဲမှာ အပင်မျိုးစုံနဲ့ အဲဒီလိုဘ၀ နေခဲ.ရဘူးတယ် .ဘယ်သူလာတောင်းတောင်း ဆေးတစ်ခွက် ကျို၊ ဘုရားပန်းတစ်အိုး၊ငြုပ်တစ်တို.လောက် ကတော့ အလကားပေးလိုက်နိုင်တယ် … အခုတော. အိပ်မက်လိုပဲ အတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလေ…… မဝေတို. တညင်သားတို.နားက ပါဒကြီးဘုရားနားမှာ တစ်နေရာဝယ်ထားတယ် ကီလိုမာလကာပင်တွေ သီဟိုလ် ပင်တွေ ပါတယ် ကျန်တာတွေတော. နောက်မှ အကောင် အထည်ဖော်ရမယ်.. အသက်ကြီးရင် အေးအေးနေ ရမယ်လို.တော. မျော်လင်.တာပဲ လေ…
အဘဆွေခြံကွက် အခုလောက်ဆို တော်တော်ဈေးတက်နေပြီ …
ရွာသွားတွေကို နဲနဲစီခွဲပေးပြီး စိုက်ခိုင်းထားလိုက်ရင် ကောင်းမယ် … အဘဆွေပြန်လာတော့ သီးပင်စားပင်ပန်းပင် အစုံနဲ့ သာယာတဲ့ခြံကြီးဖြစ်နေမှာ …
ကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးပဲ မဝေ ရေ သူများစိုက်ထားတာ အဆင်သင့်ခူးစားပြီး တရားအားထုတ် လို့ရပြီ ခွိခွိ..
ဒီလောက်ကြီးတန်မယ် မထင်ဘူး သိပ်အကျယ်ကြီးလည်း မဟုတ်ဘူး မဝေရဲ့ ပေ ၂၀၀ ပတ်လည် လောက်ပဲရှိတာ ဆိုတော့အဝေတည်.မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘိန်းစိုက်မယ့်သူ၊ စီးပွားဖြစ် သရက် သမား၊ ကျွန်းသမား၊မန်ကျီး၊ ဂွေးသီးသမား၊ ပန်းမျိုးစုံနဲအောင်သပြေ၊ အုန်းငှက်ပျော တွေ ပေါင်းလိုက်ရင် တော်ကြာ မှ ဘတော့ဘုန်းကြီးကျောင်း ကပ်နေရ ဦးမယ်။
အပင်ဆိုရင် ဝါး ။ ပန်းဆိုရင်လီလီ နဲ့ ဂန္ဓမာပန်း နေကြာပန်း ။ အသီးဆိုရင် ဖရဲ ငှက်ပျော ။ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့အပင် ။ ဟူး….. စိုက်ရတာမောလိုက်တာ ။ :D
ဘာပင်စိုက်ရင်ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားနေရင်း လူတွေကိုလဲ အကျိုးပြုနိင်တယ်ထင်လို့ `ဘိန်း ‘ စိုက်မယ်လို့တွေးမိတာပါ ..ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရာမှာ အသုံးဝင်တယ်ဆိုလို့ ကြားဘူးတာနော်… မူးယစ်ဆေး လုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိပါဘူး နောက်ပြီး ဘိန်း ပန်းက အရမ်းလှတယ်ဗျ……:)
တကယ်စိုက်သင့်တာက …. သစ်မွှေးပါ …။ မြင်ရောမြင်ဖူးကြလား။
သစ်မွှေးကို စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရုံပဲ ရှိသေးတယ်ထင်တယ်။ သဘာဝအတိုင်း အကြာကြီး စောင့်စရာမလိုပဲ ၅နှစ်နဲ့ အမွှေးနံ့ရအောင် ထိုင်းက နည်းပညာနဲ့ လုပ်ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီလာဖွင့်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုန်ကျစရိတ်တော့ ကြီးတယ်လို့ ပြောသံကြားဖူးတယ်။ ၁နှစ် ၂နှစ် သက်တမ်းရှိတဲ့ သစ်မွှေးပင်နဲ့၊ အမွှေးနံ့ရအောင် လုပ်ပုံတွေကို ဓာတ်ပုံတွေ ဗွီဒီယိုတွေ ကြည့်ဖူးတယ်။
ရွာထဲ မရောက်တာ ကြာတော့ စိုက်သွားကြတာ မြေကွက်လပ်တောင် မကျန်ချင်တော့ဘူး၊
ကန်လေးတစ်ကန်လောက်တူးပြီး ကန်ပတ်လည်မှာ တမာပင်နဲ့ မိုးမခပင် တွေ စိုက်ချင်တယ်။
ငယ်ငယ်က မန်းလေးတက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးတပ်ထဲမှာ နွေကျောင်းပိတ်ရက် သွားနေရတော့ နွေရာသီ အပူကို ကန်ရေ ဖြတ်တိုက်လာတဲ့ တမာပန်းနံ့မွှေးမွှေးလေး က တွန်းလှန်ပေးတယ်။ပူတယ်တောင် မထင်ရဘူး ၊တမာရွက်ချဉ်လည်းလုပ်စား၊ တမာသီးက ပိုးသေတယ်၊တမာခေါက်က သွားခိုင်တယ်။
မိုးမခကတော့ ပေါင်ချိန်ကားထဲမှာ ပီကင်းမြို့ကရေကန်တွေမှာ အမြဲပါတယ်လေ၊ရေကန်ထဲကို အရွက်တွေ တွဲလွဲကျနေတာ သိပ်လှတယ်။မိုးမခခေါက်က ငှက်ဖျားပျောက်တယ်လို့ကြားဘူးတာဘဲ။စိုက်ရလွယ်တယ်၊ကိုင်းထိုးစိုက်ရုံဘဲ။
သရက်သီးမစားရသေးလည်း အရိပ်ရ။သရက်ညွန့်လေးတွေ သုပ်စားလို့ရတယ်။
နောက် ဒန့်ဒလွန်ပင်ကလည်း စိုက်လို့လွယ်တဲ့အပြင် အရွက်က ၁၂ ရာသီစားရတယ်။သွေးတိုးကျတယ်၊
ဒန့်သလွန် အရွက်က ဆီးကျိတ်ရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ နိုင်တယ်လို့ တိုင်းရင်းဆေးဆရာ ပြောတာ ကြားဖူးတယ်။ အမျိုးသားများ မစားသင့်ဘူးလို့ ကြားဖူးတယ်။
တကယ်ကြိုက်တယ်။( ကိုယ်က အသေမဟုတ် အရှင်နှော်၊ သူစိုက်တဲ့ တစ်သောင်းဆိုရင် ကိုယ်တို့ဘ၀တူ ငှက်ဘယ်လောက်တောင် နားခိုနိုင်လိုက်မလဲ)
4 နှစ်တောင်ကြာပေါ့။ကေဇီလေးတော့ အတော်တူးဆွလိုက်ရမယ်။
ဒီ ၄နှစ်မှာ ဒီထဲကျန်နေသေးတဲ့ ရွာသူား ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိပြီး ဘာပင်တွေများ စိုက်မိကြပါလိမ့်။
(ကျမကတော့ သရက်ပင်နဲ့ တမာပင် နဂိုကတည်းက စိုက်ထားပြီးသား…)
Khin Thin Thin မြေ က ၁ဧက ဘဲဆိုတော့
ဒန့်ဒလွန်ပင် သရက်သီး မရမ်းသီး ဇီးသီး
ဘ၀တူ မြေ တဧက ရတဲ့ သုတွေကို
ပျိုးပင်နဲ့ အတူ အကြံပါပေးပါမယ် (FB ကသူငယ်ချင်းက ၀င်ဖြေတာ)
ဒီမှာတော့ စိုက်ထားတဲ့ Daffodale အပင်တွေ စပွင့်ပြီ။
အရီး ကတော့ ရတဲ့ မြေမှာ ရာသီအလိုက် အပင် တွေ ပြောင်းစိုက်မယ်။
တစ်ပုံစံ ထဲ မြင်ရတာ ပျင်းစရာ ထင်လို့။ :))
.သစ်ပင် မစိုက်ဖူးသေးလို့ လျှောက်ပြောနေတာ ဖြစ်မယ်။ လက်တွေ့မှာ အပင်တစ်ပင်ဖြစ်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ မိုးတွင်းဆို ရေမြုပ်၊ ဒါမှမဟုတ် ပေါင်းမနိုင်။ နွေနဲ့ ဆောင်းဆို ရေမရှိ။ အခု နွေအပူက ဟိုတုန်းကလို မဟုတ်ဘူး။ မီးနဲ့မြိုက်ထားသလိုကို ပူတာ။ အပင်လေးတစ်ပင်စိုက်ပြီး ၃ရက်လောက် ရေမလောင်းနိုင်ရင် ကြွရော။ ကိုယ်နေတဲ့နေရာနဲ့ နီးနီးမဟုတ်ရင်လည်း စိုက်ထားတဲ့အပင်တွေ သူများနှုတ်သွားရော။ ဖြစ်ထွန်းလွယ်တဲ့ အုန်းတို့ ကွမ်းတို့ စိုက်ရင်လည်း မြေသား ပျက်စီးတယ်။ အုန်းသီးကြွေကျမယ့် အန္တရာယ်ရှိတယ်။ အုန်းပင် ကွမ်းပင်တက်သမား ရှာရခက်တယ်။ သေချာတာက ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်ရင် (မာလီလို မလုပ်နိုင်ရင်) အဲဒီအပင်က ရလာမယ့် အကျိုး ကျေးဇူးထက် စိုက်ပျိုးစရိတ် ကုန်ကျမှုက ပိုများမယ်။ ခြံရှင်းသမားခေါ်ရင် အောက်ထစ် တစ်ရက် ငါးထောင်။ အပင်က ဖြစ်ထွန်းရင် ဒီလောက် မ၀င်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မစိုက်သင့်ဘူးလို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရင်းရတာ ကြီးလွန်းလို့ မြေပိုရှိသူတိုင်း သစ်ပင်ကြီးစိုက်ထားသင့်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှု ပ်နှံထားသင့်ပါတယ်။ ရင်းရတာ ကြီးလွန်းလို့ ဘာမှပြောပလောက်အောင် တန်ဖိုးရှိမလာတဲ့ အပင်ကို သာ မစိုက်သင့်တာပါ။ ဥပမာ… ဗောဓိညောင်တို့ ဘာတို့ကို ဆိုလိုတာပါ။ အချိန်ရော လုပ်အားရော ငွေရော ရှိရှိသမျှ ရင်းလိုက်ပြီးတော့မှ …
သများက လက်ဆိပ် အားဂျီးရှိတာ။
ဒီတိုင်းထိုးစိုက်ရတဲ့ ကြက်သွန်နီ ဥပင်တောင် သေတာပါဆို။
ခုတော့ ရွှေလာငွေလာလေးကို အိုးလေးနဲ့ စိုက်ထားတာ ရှင်တယ်။